–सबैभन्दा पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आजका दिनसम्म ‘पार्टी एकता भारत जानुभन्दा पहिले गर्ने भएकाले चाँडै प्रतिवेदन तयार गर्नुस् भन्नुभएकै छैन ।’ उहाँले नभन्नुभएको मात्र होइन उहाँको आशय यो छ रे भनेपछि हामीले सोधेका पनि थियौं । मैले आफैंले पहिले नै गर्नुपर्ने हो र ? भनेर सोधेको पनि थिँए । उहाँले त्यस बेला ‘होइन, काम भ्याइयो भने गर्ने हो, त्यसका निम्ति हतार गर्न पर्दैन’ भन्नुभएको थियो । बाहिर प्रचारमा आए जसरी कुरा तय भएकै होइन । दोस्रो कुरा, त्यो कारणले काममा ढिलासुस्ती भएको छैन । हामीले त प्रतिवेदन तयार गरेकै तिन चार दिन भइसक्यो । संयोजन समितिलाई बुझाउनका निम्ति खासगरी दुबै पार्टी अध्यक्षहरुको समय आवश्यक भयो । हामी त्यो समय माग गरिरहेका थियौं ।
–संख्याको समानतामा आजसम्मको यतिहासमा कहिल्यै पनि पार्टी एकता भएको छैन । अहिले कतिपय साथीहरुले ०४७ सालमा माले र माक्र्सवादीको एकता समानताको आधारमा भएको थियो भनेर । त्यो इतिहासलाई बिर्सिएका साथीहरुले भन्ने गरेका छन् । मलाई राम्रो गरी संझना छ, त्यतीबेला कार्यकारी कमिटीको रुपमा राष्ट्रिय परिषद रहेको थियो । त्यो परिषद ७० जनाको थियो । ७० जना मध्ये ४२ जना मालेतर्फका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । २८ जना माक्र्सवादी तर्फका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । यसकारणले संख्यामा बराबरी हुँदैन । भावनामा बराबरी होला, विचार र दृष्टिकोणमा समानता होला, नीतिमा एकरुपता होला तर संख्यामा भने बराबरी हुन सक्दैन । सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, सम्मानजनक कसलाई ? के को सम्मान ? सबैभन्दा पहिले त जनताको सम्मान गर्नुपर्छ । जनमताको सम्मान गर्नुपर्छ । हामी जनताका पार्टीहरुका निम्ति जनमत नै सबैभन्दा ठुलो सम्मान गर्नुपर्ने विषय हो । त्यसकारणले जनमतको सम्मान गरेर एकता गर्ने कुरा नै सबैभन्दा उपयुक्त एकता हो । त्यो भन्दा अन्यथा कुरा हो भने चाँही त्यो अलि अफ्ठ्यारो कुरा हो ।
० माओवादीले चाँही वडा तहसम्म्ौ दुई अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव ल्यायो भन्ने कुरा के हो ?